चैत्र १२ गते सोमबार मार्च २६ को राशिफल
आज श्री शाके १९३९ बि.स. २०७४ साल चैत्र १२ गते सोमबार इश्वी सन २०१८ मार्च २६ तारीख चैत्र शुक्ल पक्ष दशमी तिथी चन्द्रमा मिथुन राशिमा प्रातः ०६ः४२ बजे सम्म पश्चात कर्कट राशिमा सुर्य उत्तरायण वसन्त ऋतु – ज्यो.पं. सरोज घिमिरे
सामान्य मानसम्मान प्राप्त हुने योग रहेको छ । पठनपाठनमा भने त्यति राम्रो समय रहेको छैन । आर्थिक क्षेत्र मजबुत रहेको छ । नयाँ कार्यको थालनी दीगो फाईदा मुलक रहनेछ । दाम्पत्य शुखमा भने सामान्य खटपट रहला ।
मित्र तथा दाजु भाई हरुको साथ सहयोद्वारा कार्य सम्पादनमा सहजता प्राप्त हुनेछ । मान्यजनको भेटघाट बाट मन प्रशन्न रहला । श्रम परीश्रमको कदर नहुनाले मनमा सामान्य खिन्नता उत्पन्न हुनेछ । सामान्य यात्रा रहनेछ ।
स्थीर श्रोत साधनको लगानिमा बिशेष फाईदा हुने समय रहेको छ । खानपानको योग रहेको छ । यात्रामा सामान्य झन्झट आईपर्ला । बोलिको प्रभाबले गर्दा कार्य क्षेत्र सजिलो हुनेछ । कुलकुटुम्ब हरुको साथ ले मन हर्षित रहला ।
तपाईको उदार पनको कारण आफ्न्तजनहरु प्रशन्न रहलान् । निर्णय गर्ने क्षमतामा बृद्यि हुनेछ । अरुको छीटो बिश्वास गर्ने बानिको कारण तपाँईलाई कार्य सम्पादनमा सामान्य झन्झट आईपर्नेछ । भौतिक श्रोत साधनको प्रयोगले मन प्रशन्न रहला । दिन मध्यम रहनेछ ।
मित्रजनहरुको भेटघाटमा सामान्य खर्च हुने समय रहेको छ । लगानी को क्षेत्रमा बिशेष ध्यान दिनु होला । तपाईको गरेको कार्यको फाईदा गैर ब्यक्ति हरुले सहजै उठाउन सक्नेछन् । मानसीक चिन्ताले सताउन सक्नेछ ।
आम्दानिको निम्ति सामान्य यात्रा हुन सक्छ । बिद्या प्राप्ति योग तथा बौधिक बिकाश हुने समय रहेको छ । भौतिक श्रोत साधनको प्रयोगले मन प्रशन्न रहला । पारीवारिक साथ सहयोग बाट काममा बिशेष फाईदा हुनेछ ।
कार्य क्षेत्रमा लगाइएको परीश्रमको उचित मुल्याङकन हुनेछ । मान्यजनको भेटघाट तथा साथ सहयोग प्राप्त हुनेछ । सबारी साधनकाृे प्रयोगमा बिशेष ध्यान दिनुहोला । मनोरञ्जनको क्षेत्रमा धेरै समय ब्यतित हुन सक्छ ।
धार्मिक क्षेत्रको यात्रा ले मन प्रशन्न रहला । हराएको माल सम्मान फेला पर्न सक्ने सम्भाबना रहेको छ । मित्रजनहरुको साथ सहयोग प्राप्त हुनाले कार्य क्षेत्र सहज रहनेछ । आट र शाहास को कमिले सामान्य झन्झट आईपर्ला ।
स्वास्थ सम्बन्धि समस्याले सताउन सक्छ । सामान्य खर्च हुने योग रहेको छ । साधारण बादबिबादमा फस्न सक्ने सम्भाबना रहेको छ । खानपानमा बिशेष ध्यान दिनु होला । अरुको भर पर्नाले तपाँईलाई सामान्य धोका हुन सक्छ ।
पारीवारिक साथ सहयोग बाट काममा बिशेष फाईदा हुनेछ । ब्यापार ब्यवसायको क्षेत्रमा समय राम्रो रहेको छ । बाणीको कारण मान्यजन सँगको सम्बन्ध सुमधुर रहने छ । मनमा भने सामान्य डरको बास रहनेछ ।
सामान्य आर्थिक अभाबको शिकार भईनेछ । स्वास्थ सम्बन्धि समस्याले सताउन सक्छ । अरुको छीटो बिश्वास गर्ने बानिको कारण तपाँईलाई सामान्य धोका तथा तपाईको कार्यको फाईदा अरुले उठाउन सक्नेछन् ।
बिशिष्ट ब्यक्तिहरुको भेटघाटले मन प्रशन्न रहला । आर्थिक क्षेत्र सबल रहेको छ । मनोरञ्जनको क्षेत्रमा समय ब्यतित रहनेछ । शारीरिक आलस्यताले कार्य क्षेत्रमा सामान्य ढिलाई हुन सक्छ । सन्तान शुख प्राप्त हुनेछ ।